Amin'ny firy taona ny zaza vao afaka mampiasa ondana - News - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Misy kaonty telo anecdotal momba an'io olana io. Iray, vao teraka dia afaka manala lamba famaohana kely, manome be loatra; Faharoa, afaka mampiasa azy ilay zaza aorian'ny 3 volana; Fahatelo, ny ankizy dia azo ampiasaina amin'ny taona 6 volana.
Tsy misy marina ireo voalaza etsy ambony ireo. Ny fepetra tokana dia ny hoe afaka mipetraka irery ilay zaza. Rehefa afaka mampiasa ondana ilay zaza, tsy mahita 3 volana, 6 volana inona, tsy karamany izany, mila mikintona kely ianao, fa mahita ny fivoaran'ny zaza. Raha toa ka tsy mila ray aman-dreny manampy azy hipetraka ny zaza dia afaka manandrana mampiasa ondana izy. Tsy tsara raha omena ondana aloha ny zaza. Satria ny tendan'ny olon-dehibe dia manana endrika miolaka antsoina hoe "tendan-tenda", ny ondana no mameno io habaka io, manamora ny torimaso sy ny fisefoana.Fa ho an'ny zazakely kosa, mbola tsy niforona ny fivontosan'ny vozon-tranonjaza, ny hazondamosin'ny vozon-tranonjaza dia somary mahitsy, tsy misy toerana toy izany, manery ondana ianao, mora ny manery ny lalan-pisefoana.
Ondana noterena, ny tena mahasempotra indrindra ah. Ny sitra-pon'ilay zaza no laharam-pahamehana indrindra eto an-tany, afa-tsy ny manome vola nefa tsy nahazo alalana avy amin'ny andaniny, zavatra hafa no mila mandinika ny fihetseham-pon'ny ankilany, ny zaza manana ondana no antony iray ihany izany dia azonao atao ny mitady famantarana fa mila ondana ny zanakao, toy ny ondana, saribakoly, lamba famaohana, akanjo na ondana amin'ny sandrin-tongotr'olon-dehibe.
Ny haavony mety dia zava-dehibe ho an'ny ankizy.Ho an'ny ankizy latsaky ny 3 taona dia mety kokoa ny mametraka ny ondana amin'ilay zaza, ny haavon'ny ondana dia 1cm eo ho eo. amin'ny ondana, afaka mampiasa fomba intuitive kokoa hitsarana ny haavon'ny ondana isika.